छठ पर्वको मुख्य दिनः पहिलो अर्घ आज साँझ अस्ताउदो सूर्यलाई अर्पण – Shirish News
महेन्द्रनगर (धनुषा )२७गते
तराईवासी नेपालीको महापर्व छठको आज मुख्य दिन ब्रतालुहरु साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन् । संसार लाई जीवन दिने भगवान भाष्कर (सूर्य देव) लाई विधि पूर्वक यस पर्वमा पूजा गर्ने गरिन्छ । भगवान भाष्करलाई आज व्रतालुहरुले पहिलो अर्घ दिएका छन् ।
अाफूलाइ पायक पर्ने नदी, तलाउ तथा पोखरी किनारमा बनाइएका छठ घाटहरुमा आज व्रतालुले अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेका छन् भने भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई दोश्रो अर्घ चढाएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुनेछ ।
हिजो बेलुका पूजा पश्चात खाएको प्रसाद को भरमा रहेर व्रत बसेका व्रतालुहरुले अब भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि मात्र अन्न/जल ग्रहण गर्नेछन् ।
लगातार ३६ घण्टा सम्म निर्जल र निराहार भएर गरिने यो व्रत तराईवासीले निकै आश्था र श्रद्धा पूर्वक मनाउने गर्छन् । छठ व्रत गर्दा शरीरका रोगहरु नाश हुनुका साथै सन्तान प्राप्ति हुने र परीवारमा सुख शान्ति छाउने विश्वास छ ।
छठ : षष्ठी र परमेश्वरीको पूजा आरधाना
छठ पर्वमा मूलतः सूर्य षष्ठी अर्थात् सूर्य एवम् षष्ठी दुवैलाई उपासना गरिन्छ । यस पर्वका गीतहरूमा दिनानाथ र छठ परमेश्वरीको महिमाको खुबै बखान गरिन्छ ।
यस सम्बन्धमा सांस्कृतिविद् गोविन्द झाका अनुसार प्रस्रवपश्चात् केही दिन शिशुमाथि प्राण सङ्कट रहन्छ र त्यो निर्विघ्न वित्दैजाँदा छैठौँ राति शिशुलाई रक्षा गर्ने एक तान्त्रिक देवीको पूजा गरिन्छ ।
यसै देवीको नाम हो– षष्ठी (छठी) । पण्डित झाका अनुसार पहिलो शिशुलाई रक्षा गर्ने हो भने अर्की बच्चा दिने हुन् । पहिलो षष्ठी राति (छैठौं राति)को दिव्यरूपा हुन् भने अर्की षष्ठी (छठी, जो छठ हुन्) तिथिको दिव्य रूप हो ।
पहिलो देवीको पूजा नित्य अनिवार्य हो, जसको शिशुको जन्मको छैठौं राति हुन्छ र यसलाई छठियार भनिन्छ । तर अर्कीको पूजा काम्य (अतिरिक्त) हो । यसलाई भाकल गरेपछि मात्रै छठ पर्व मनाउने हुन् ।
सूर्य पूजामा छठ परमेश्वरीको प्रवेश यस कुरालाई सङ्केत गर्छ । हाम्रा वैदिक अनुष्ठानमा तान्त्रिक अनुष्ठान कसरी मिसिन पुग्छ । सूर्य विशुद्ध वैदिक देवता हुन् भने छठी शुद्ध तान्त्रिक । आखिर जे भए पनि पण्डित झा छठ सबैभन्दा पुरानो पर्व रहेको दाबी गर्छन् ।
साहित्यकार डा. रेवतीरमण लालका अनुसार अस्ताउँदो सूर्यलाई जुन अर्घ दिइन्छ, त्यो छठी परमेश्वरी हुन् । उदाउँदो सूर्यलाई जुन अर्घ दिइन्छ, त्यो नै दिनकर दिनानाथ वा सूर्यदेव हुन् । मैथिलीका इतिहासकार डा. प्रफुल्लकुमार सिंह एउटा लोक धारणा उद्धृत गर्दै भन्छन्, ‘आदित्य मल्ल सूर्य तथा छठ परमेश्वरीको सम्बन्ध भाइबहिनीको हो ।’
आमधारणाअनुसार लोक मातृका षष्ठीको पहिलो पूजा सूर्यले गरेका थिए । यता कोशीले आफ्नो बहिनी कौशिकीको, भैरवले कालीको, कोइलाले कमलाको तथा गोरइयाले वाक्देवी बन्नीको पूजा गरेका थिए ।
सूर्यले छठी माताको पूजा गरेका थिए । कतिपय सांस्कृतिकविदका अनुसार उषा छठ नै परमेश्वरी हुन् । यता परमेश्वरी र षष्ठीको बारेमा अहिले पनि अन्योल कायम देखिन्छ । सांस्कृतविद प्रा.डा. राजेन्द्र विमलका अनुसार छठ परमेश्वरी को हुन् र सूर्यसँग यिनको के सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा अस्पष्ट नै छ ।
यसरी मनाइन्छ छठ
यस पर्वमा सप्तमी युक्त षष्ठी तिथिमा व्रत गर्ने परम्परा रहेको छ । सूर्य देवतालाई पहिलो दिनको ‘सझुँका अर्घ’ (अर्घ) सोही दिन नै अर्पण गरिन्छ ।
सूर्य देवतालाई अर्घ दिइने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप उदयकालमा दिइने अर्घका लागि समेत त्यही विधि अपनाइन्छ र उक्त दिन पनि सप्तमी तिथि नै रहेको बेला ‘भोरका अर्घ’ दिइन्छ ।
छठ पूजामा साँझको समयमा सूर्य देवतालाई प्रसादका रूपमा अर्घ अर्पण गरिन्छ, उक्तप्रसाद नै पुनः बिहानको समयमा अर्थात् ‘भोरका अर्घ’ मा दिइने गरिन्छ ।
सूर्य देवतालाई अर्पण गरिएका प्रसाद साँझदेखि बिहानसम्म दुल्हीझैँ सिँगारिएका जलाशयमा बनाइएको घाटमा नै राखिन्छ ।
छठ व्रत गर्नेहरू सबैजना चौठी तिथिका दिन नुहाई धुवाई गरी चोखो भई अर्वाअर्वाइन खाने गर्छन् । यही तिथिका दिनदेखि छठ पर्व औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यस दिन व्रत गर्ने महिला र पुरुष नुहाई धुवाई शुद्ध भएर वस्त्र लगाई शाकाहारी भोजन खाने गर्छन् ।
कात्तिक शुक्ल पञ्चमी तिथिको दिनभरी पर्व गर्नेले उपवास बस्छन् । उक्त दिन साँझमा माटोले बनाइएको नयाँ चुल्होमा नयाँ माटोको भाँडामा अरबा चामलमा सख्खरको खीर बनाउने गर्छन् ।
खरनाको दिन सख्खर राखेर बनाइएको खीर देवी देवतालाई प्रसादका रूपमा चढाइन्छ र प्रसाद स्वरूप खीर व्रतालुका साथै घरका अन्य सदस्यले पनि ग्रहण गर्छन् । कात्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका दिन व्रत गर्ने महिला डुब्दै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने गर्छन् भने जुन पुरुषले व्रत गर्ने गर्छन् ।
पुरुष व्रत गर्नेले सूर्य देवतालाई अर्घ अर्पण गर्ने समयसम्म पोखरी, ताल तलैयामा सूर्य देवतालाई हातमा नरिवल वा अन्य कुनै फलफूल लिई उभिरहन्छन् । साँझको समयमा घण्टौँसम्म जलमा उभिएर नाङ्लो, कनसुप्ती, ढकना, सरबा लगायतमा राखिएका प्रसाद लिएर डुब्दै गरेको सूर्यलाई अर्घ चढाउने गरिन्छ ।
छठ व्रत गर्नेको घरका सबै सदस्य प्रायः रातभर सरोबरको घाटमा जाग्राम बस्ने गर्छन् । छठको प्रसादमा ठकुवा, भुसवा, केरा, नरिवल, उखु, सुन्तला, कागती, सिंग्हारा (पानीमा फल्ने फल), पान, सुपारी, धूप, दीप, अरतक पात, चना र अगरबत्ती आदि रहन्छन् ।
पर्वको दिन व्रतालुलाई मन्त्रोच्चरण गरी सङ्कल्प लिने गर्छन् । रातो फूल, दुबो अक्षता र प्रसादका लागि तयार पारिएका परिकारसहित जल लिएर सूर्यतिर हेर्दै ‘नमोस्तु सूर्याय नमः’ उच्चारण गरी सम्पूर्ण डाला उत्सर्ग गर्दै कथा सुन्ने गरिन्छ ।
त्यसपछि पारण दिन व्रत गर्ने महिला पुरुष सबै जना घर फर्किन्छ र भोजन गर्छन् । पारण भएपछि ४ दिवसीय छठ पर्वको समापन हुन्छ ।
षष्ठी देवी कात्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका दिन डुब्दै गरेको सूर्यका साथ साथै षष्ठी देवीको पनि पूजा गरिन्छ ।
पुराणका अनुसार प्रकृति देवीको एक प्रधान अंशलाई देवसेना भनिन्छ । जसलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ मातृका मानिन्छ । माता सृष्टिको सम्पूर्ण जीवको रक्षिका देवी हुन् । प्रकृतिको छैठौँ अंश भएका कारण उनको नामसमेत षष्ठी रहेको छ ।
षष्ठी देवीको पूजनको प्रचार प्रसार ब्रह्मवैवर्त पुराणका अनुसार राजा प्रियव्रतकको कालदेखि आरम्भ भएको मानिन्छ । यस कारण ‘छठी माता’ भन्ने परम्परा छ ।
छठको पौराणिक महत्व लङ्का विजयपछि रामराज्यको स्थापनाका दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका दिन भगवान राम र माता सीता उपवास बस्दै सूर्यदेवको आराधना गरेका थिए । उनीहरूले सप्तमी तिथिका दिन सूर्योदयको समय अनुष्ठान गरी सूर्यदेवबाट आशीर्वाद प्राप्त गरे ।
एक किसिमले छठ पर्वको आरम्भ यसै दिनदेखि भएको मानिन्छ । ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सूर्यलाई मानिन्छ । यसैकारणले गर्दा हिन्दू शास्त्रमा सूर्यलाई प्रत्यक्ष देवताका रूपमा मानिएको छ ।
एक अर्को मान्यताका अनुसार छठ पर्व महाभारत कालदेखि सुरु भएको हो । छठ पूजाको सुरुवात सूर्य पुत्र कर्णले गरेको मानिन्छ । कर्ण भगवान सूर्यको परम भक्त थिए । उनी हरेक दिन जलमा उभिएर सूर्यलाई अर्घ दिने गर्थे ।
सूर्यको कृपाले उनी महान् योद्धा बन्न सफल भए । महाभारतमा सूर्य पूजाको अर्को वर्णनसमेत पाइन्छ । पाण्डव पत्नी द्रौपदी आफ्नो परिवारजनको उत्तम स्वास्थ्यको कामना र दीर्घायुका लागि नियमित सूर्य पूजा गर्ने गर्थिन् । छठ पर्वको कथा कथाका अनुसार राजा प्रियवद निसन्तानी थिए ।
त्यस समय महर्षि कश्यप पुत्रेष्टि यज्ञ गराएर उनकी पत्नी मालिनीलाई यज्ञाहुतिका लागि बनाइएको खीर खानका लागि दिए । यसको प्रभावले उनलाई सन्तानका रूपमा छोरा प्राप्त भयो तर उक्त छोरा पनि मृत नै जन्मिए । प्रियवद पुत्रलाई लिएर श्मशान गए र आ पुत्र वियोगमा प्राण त्याग्न लागे ।
ठीक त्यही समय मानस कन्या देवसेना प्रकट भइन् र भनिन् सृष्टिको मूल प्रवृत्तिको छैठौँ अंशबाट उत्पन्न भएका कारण मेरो नाम षष्ठी परेको छ । ‘हे राजन् तपाईं मेरो पूजा गर्नुस् तथा अन्य व्यक्तिलाई समेत यसका लागि प्रेरित गर्नुस् ।’ राजा पुत्र इच्छाले देवी षष्ठीको व्रत गरे र उनलाई पुनः पुत्र प्राप्ति भयो । उनले गरेको यो पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिको दिन भएको थियो ।
यस प्रकार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिको दिन अर्थात् छठी मैयाको पूजा गर्ने परम्परा बन्यो । छठ पर्वको वैज्ञानिक महत्व छठ पर्वको परम्परा वैज्ञानिक र ज्योतिषीय दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण रहेको पाइएको छ । षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसरको रूपमा रहेको छ, जुन समयमा पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा सूर्य रहन्छ र दक्षिणायन सूर्यको अल्टुभोइलेट किरण पृथ्वीमा सामान्यभन्दा बढी मात्रामा एकत्रित हुन्छ ।
किनभने यस समयमा सूर्य आफ्नो तलको राशि तुलामा रहेको हुन्छ । जसकारण दूषित प्रकाशको सीधा प्रभाव जीवको आँखा, पेट र छाला आदिमा पर्ने गर्छ । सूर्यको प्रकाशलाई परावैजनी प्रकाशबाट जीवको हानिनोक्सानी नहोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सूर्य पूजाको रहस्य लुकिएको विज्ञानका जानकारको भनाइ रहेको छ ।
सामाजिक सांस्कृतिक महत्व छठ पूजाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसको पवित्रता र लोकपक्ष रहेको छ ।
यो पर्वले समाजमा सबैको महत्व आआफ्नो स्थान उत्तिकै छ भन्ने कुराको आभाष समेत गराउँछ । जसरी माटोका सामग्रीका लागि कुम्हाले, बाँसको सामग्रीका लागि डोम समुदाय, पूजाअर्चनाका लागि ब्राह्मण पुरोहितनी, सख्खर, चामलका लागि किसान र व्यापारीलगायत, पूजाका प्रसाद बनाउनका लागि महिला, घाटमा लैजानका लागि पुरुष र जसरी कुनै दिनदुःखी बिनाचप्पल जुत्ता हिँड्ने गर्छन् ।
त्यसैगरी छठको विशेषतासहितको मैथिली लोक गीत सङ्गीतले जीवनलाई सार्थक बनाउन र पवित्र पर्वका लागि अझ बढी निष्ठावान् बनाउन सहयोग गर्छ । छठको सन्देश छठ पर्वमा उत्पादन, सीप र संस्कारको समिश्रण पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि हस्तनिर्मित बाँसको नाङ्लो, कनसुप्ती, माटोद्वारा निर्मित सामग्रीहरू, ढकना, सरबा, दियो, हाथी आदि–इत्यादि सामग्रीहरूको प्रयोग हुन्छ ।
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिंदै छठ पर्व सम्पन्न